Horizon Institute waxa ay Dib u cusboonaysiinaysaa Baaqeedii ahaa in la helo Baadhis Madax-bannaan oo ku saabsan Kiiskii Xarrunta Agoomaha Hargeysa ee qaabka xun loo maareeyey
Wednesday 13th January 2021 11:29:20 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
25 June 2020, Horizon Institute waxa ay soo saartay baaq dadweyne oo ay kaga codsanaysay
xukuumadda Somaliland in ay billaabaan baadhis madax-bannaan sidii, iyo sababtii Laanta Danbi Baadhista (CID) ay ugu guuldaraysatay in ay sameeyaan baadhis dhab ah oo ku saabsan eedaymaha in gabadh dhallinyaro ah oo ku noolayd Xarrunta Agoomaha Hargeysa ay martay qadhaadhka iyo xanuunka kufsiga. Tallo-soojeedintaasi waxa ay lahayd ujeedo laba dhinac ah. Waa ta koowaade in la xaqiijiyo in dhibanuhu ay hesho caddaaladdii ay u baahnayd isla markaa ay u qalantay. Ujeedada labaad oo ahayd in la xaqiijiyo in ay jirtay caddayn ku filan oo ka dhan ah wiilasha dhallinyarta ah ee ku noolaa Xarrunta Agoomaha kuwaas oo loo xidhay danbiga kadib markii CID-du samaysay dhawr waraysi oo degdeg ah.
Nasiib-darro, dib-u-eegis madax-bannaan may dhicin. Taabadalkeeda, waxa lagu degdegay xukunkii, halkaas oo laba maxkamadood ku qabsoontay Hargeysa, October oo ay ka hor qabsoontay Maxkamadda Gobolka ee Maroodi-Jeex iyo December oo ay ka hor qabsoontay Maxkamadda Racfaanka ee Maroodi-Jeex. Warbixin ay Horizon soo saartay 30-kii December 2020, waxa ay ku faahfaahisay Gafka Caddaaladeed ee ka dhanka ah shanta wiil kuwaas oo si joogto ah u diiday in ay ku lug lahaayeen kufsiga. Iyada oo ku doodaysa in go'aanka xukun xabsiga lagu riday aanu sharciga waafaqsanayn, Horizon sidoo kale waxa ay cambaaraysay maqnaanshaha caddayntii ka dhanka ahayd dhallinyartan eedaysaneyaasha ah. Kiisku hadda waxa uu hor yaalaa Maxkamadda Sare oo dhagaysan doonta, halkaas oo la rajaynayo in ay sii deyn doonto wiilashaas.
Shalay, 11 January 2021, qoysaska afar kamid ah dhallinyartaas ayaa telefishanka si cad uga hadlay. Waxa ay direen baaq ah in ay caddaalad helaan, taas oo ayna u rabin oo kaliya ubadkooda ay waalidka u yihiin, balse sidoo kale in dhibanuhu hesho caddaalad.
Qoysaskii shalay hadlay waxa ay sidaa u sameeyeen iyaga oo rumaysan in codkooda oo la maqlaa uu sababi doono, ugu yaraan in natiijo fiicani ka soo baxdo kiiska marka uu gaadho Maxkamadda Sare. Horizon Institute waxa ay la wadaagaysaa in helitaanka dhegaysi xog iyo caddaalad ku salaysan, isla markaa si fiican loo baadhay uu sababi doono in shantaa wiil helaan xorriyadooda. Natiijadaas oo sidoo kale ay la socoto in la go'aansado in laga gun gaadho xaqiiqada wixii ka dhacay Xarrunta Agoomaha, sidee ayay u dhici kartaa in gabadh yar oo daryeelkooda ku hoos jirtaa ay u mari karto dhibtaas qadhaadh, waa maxay sababta loo daboolay yaase qaadaya masuuliyadda dhacdooyinkaa silsilada murugada leh ee iska daba dhacayey.
Si aad u akhridid bayaanka, guji halkan
Guji halkan si aad u daawatid waraysigii Telefishanka ay siiyeen qoysasku, Horn Cable iyo MM Somali TV.
Guji halkan si aad u akhridid labadii warbixinood ee hore ee ay Horizon ka diyaarisay kiiska Xarrunta Agoomaha:
Bayaanka 1: Somali, English.
Bayaanka 2: Somali, English.
Hay'adda Horizon waa Urur Maxalli ah oo ka hawlgala Somaliland kana shaqeeya sidii loo horumarin lahaa sarreynta sharciga iyo xuquuqal insaanka. Warbixinaha iyo daraasadaha aanu soo saarnaa waxa ay daah-furaan arrimaha taaggan ee lagu ogaaday shaqada aanu qabano. Waxa ay bixiyaan xog iyo gorfeyn loogu tallo galay in ay cariso doodda ka dhaxaysa daneeyeyaasha, dadweynaha iyo deeq-bixiyaasha iyo in ay kor u qaado siyaasadaha xukuumadda iyada oo lagu salaynayo qadarinta xuquuqal insaanka, sarraynta sharciga iyo dhiirigelinta isku filaanshaha.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee aad u baahan tahay, waxa aad nagala soo xidhiidhi kataa email-ka [email protected].
Ma waxaad qiimaysaa qofka